फूल क्रिसमस संस्करण | शीर्ष स्लट बेलायत | CoinFalls अनलाइन क्यासिनो
फूल को को छ शीर्ष स्लट बेलायत कि NetEnt द्वारा विकसित गरिएको छ. यहाँ क्रिसमस को मौसम संग, यो स्लट क्रिसमस को मूड अनुरूप हुन र खेलाडीहरू भण्डारमा राखिएको छ कि आश्चर्य जीत गरौं लागि डिजाइन गरिएको छ. त्यहाँ रील मा सुन्दर फूल र फूल क्रिसमस संस्करण मा यो धेरै-प्रतीक्षा तिहार को सुन्दरता प्रदर्शन पृष्ठभूमिमा छन्. क्रिसमस सजावट हरेक स्पिन संग उत्सव मुड मा खेलाडीहरू प्राप्त गर्न निश्चित हो.
थप, त्यहाँ खेलाडी गर्न hefty जीत हुनेछ केही रोमाञ्चक सुविधाहरू छन्. केही ठूलो पुरस्कार जित्न र शीर्ष स्लट बेलायत खेल को यस संस्करण संग कहिल्यै अघि जस्तै एक खेल अनुभव रमाइलो गर्न तयार . मौसम निश्चित छ कि यो स्लट संग समृद्ध गरिएको छ सुविधाहरू लागि रोशन अप. त्यसैले, माथि बकसुआ र यो स्लट खेल संग एक सार्थक यात्रा लागि तयार.
फूल क्रिसमस संस्करण को विकासकर्ता थप
NetEnt द्वारा संचालित, फूल क्रिसमस संस्करण एक मनोरंजक शीर्ष स्लट मा indulged गर्न बेलायत छ. NetEnt सधैं गुणस्तर खेल यसलाई सिर्जना लागि ज्ञात गरिएको छ र तिनीहरूले प्रत्येक क्यासिनो खेल संग तिनीहरू विकास सुनिश्चित, खेलाडीहरू एक अद्भुत खेल अनुभव अनुभव.
को गेमप्ले बारे र कसरी प्ले गर्न
यो रोमाञ्चक शीर्ष स्लट बेलायत बनेको छ5रील र 30 paylines, र खेलाडीको पकड प्राप्त गर्न को लागि केहि महान जीत छ कि विभिन्न प्रतीकहरू छन्. क्रिसमस को सम्पत्तिहरू र उच्च कम्पोजिंग रील र कम तिर्ने प्रतीक सजिएको छ, जो एक काठ सीमाना मा सेट रील.
जितको राशि स्लट बना छ कि विभिन्न प्रतीक तुरुन्त बढाया गर्न सकिन्छ. विभिन्न फूल विभिन्न मानहरू प्रत्येक छ, प्रत्येक राख्नुभएको मान जान्न paytable पढ्न.
चन्द्रमा सान्ता टोपी यो स्लट खेल मा जंगली छ र यसले अरूलाई विकल्प हुनेछ विजेता संयोजन पूरा गर्न. यो स्क्याटर बादल छ, पनि निःशुल्क spins यसको लागि प्रतीक निःशुल्क spins दौर जीत गुणन र दुगुना प्राप्त जसमा मा खेलाडीहरू लिन्छ.
यो wilds, छरिन्छ, मुक्त spins यो स्लट खेल मा इनामदायी सुविधा र बिरूवाहरू भर्खर हुर्कदै छन् र यसलाई तत्काल जितको रकम र मजबूत हुनेछ.
Coinfalls क्यासिनो मा फूल क्रिसमस संस्करण खेल्न र यो शीर्ष स्लट बेलायत स्लट खेल मा विभिन्न सुविधाहरू संग धेरै जीत को पकड प्राप्त. क्रिसमस रोशनी प्रत्येक स्पिन तपाईंलाई लागि केही अचम्मको जीत ल्याउन गरौं.